Home » Travel Associations News » Manatevin-daharana ny ezaka ataon'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany i Sierra Leone
Ny birao fizahantany afrikanina dia faly nanambara ny fanendrena ny Dr.Majunatu Pratt, Minisitry ny fizahan-tany sy ny kolontsaina Sierra Leone, ho an'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB). Mpikambana ao amin'ny filankevitry ny minisitra mipetraka sy mpiasam-panjakana voatendry izy.
Sierra Leone dia mandrafitra karazan'asam-pirazanana mahavariana, raha jerena ny haben'ny firenena. Ity zom-pirenena marobe ity dia mandray anjara amin'ny fitomboan'ny harinkarena. Ny Sierra Leoneans dia manana fifangaroana fomban-drazana kolontsaina. Olona mavitrika sy faly ary maneho hevitra izy ireo ary ny soatoavina ara-kolotsaina, ny fomban-drazana ary ny rafi-pinoany dia ampiharina sy hajaina.
Sakafo isan-karazany, fitafiana marevaka, firavaka, asa tanana vita tanana, fety velona ary fampisehoana zava-kanto no asehon'ity fiaraha-monina miloko ity. Tsy fantatry ny mpizahatany izay mety ho sendra azy ireo! Manodidina ny zorony manaraka dia mety hisy fampisehoana ara-kolontsaina nasionaly handihizan'ny mpandihy nentim-paharazana sy hifaliana amin'ny amponga sy mozika.
Ny mponin'i Sierra Leone dia fanta-daza amin'ny fisakaizan'izy ireo sy ny fandraisany vahiny ary ny fiainana dia alaina haingana be.
Tambajotra Marketing Travel
Etazonia: (+1) 718-374-6816
Alemana: (+49) 2102-1458477
Aostralia: (+61) 2-8005-1444
Hong Kong, Sina: (+852) 8120-9450
Cape Town, Afrika Atsimo: (+27) 21-813-5811